Lo mgaqo-nkqubo wabucala ulawula indlela eqokelelwa ngayo, isetyenziswe, igcinwe kwaye ivezwe ulwazi oluqokelelwe kubasebenzisi (ngamnye, "uMsebenzisi") wewebhusayithi ye-https: //www.ytpals.com ("Indawo"). Lo mgaqo-nkqubo wabucala usebenza kwiSiza kunye nazo zonke iimveliso kunye neenkonzo ezinikezelwa yi-YTpals.
Singaluqokelela ulwazi lokuzazisa oluvela kubasebenzisi ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, xa Abasebenzisi betyelela indawo yethu, bebhalisa kule ndawo, beka iodolo, babhalise kwincwadana, bagcwalise ifom, kwaye ngokunxulumene eminye imisebenzi, iinkonzo, amanqaku okanye izixhobo esizenza zifumaneke kwiSiza sethu. Abasebenzisi banokucelwa, ngokufanelekileyo, igama, idilesi ye-imeyile, idilesi yokuthumela. Asiqokeleli ulwazi lwekhadi letyala. Abasebenzisi banokuthi batyelele iSiza sethu ngokungachazwanga. Siza kuqokelela ulwazi lokuzazisa oluvela kubasebenzisi kuphela ukuba ngokuzithandela bangenisa olo lwazi kuthi. Abasebenzisi banokuhlala benqaba ukubonelela ngolwazi lokuchonga lomntu, ngaphandle kokuba kunokubathintela ekubandakanyekeni kwimisebenzi ethile enxulumene neSiza.
ulwazi yokuzazisa Non-lobuqu
Siya siqoqe ulwazi yesazisi-non-lobuqu malunga Abasebenzisi nanini na xa usebenzisana nayo Site yethu. ulwazi yesazisi-Non-yobuqu ziquka igama umkhangeli zincwadi, uhlobo computer kunye nolwazi lobuchule malunga Abasebenzisi ngendlela uqhagamshelwano kwisayithi yethu, ezifana nenkqubo yokusebenza kunye nababoneleli-nkonzo Internet ezisetyenziswayo kunye nezinye iinkcukacha efanayo.
ibhrawuza yeWebhu cookies
Site bangasebenzisa "iikuki" ukwandisa amava User. umkhangeli web umsebenzisi ubeka cookies kwi hard drive yabo ngeenjongo zokugcina amaxesha nokujonga ulwazi ngazo. Umsebenzisi usenokukhetha ukuseta umkhangeli yabo web lokwala cookies, okanye ukuba ikwazise xa cookies ethunyelwa. Ukuba ke abenzi njalo, qaphela ukuba ezinye iindawo Site ukuze isebenze kakuhle.
Indlela saqokelela ulwazi
I-YTpals inokuqokelela kwaye isebenzise ulwazi lwabasebenzisi ngezi njongo zilandelayo:
-Ukuphucula inkonzo yabathengi: Iinkcukacha osinike zona zisinceda ukuba siphendule izicelo zenkonzo yabathengi kunye neemfuno zenkxaso.
-Ukuphucula indawo yethu: Sisenokusebenzisa ingxelo ekunikezelayo ukuphucula iimveliso kunye neenkonzo zethu.
-Ukuqhuba unyuso, ukhuphiswano, uphononongo okanye enye into yeSiza: Ukuthumela Abasebenzisi ulwazi ekuvunyelenwe ngalo malunga nezihloko esicinga ukuba ziya kubaomdla kubo.
-Ukuthumela ii-imeyile ngamaxesha: Sinokusebenzisa idilesi ye-imeyile ukuthumela ulwazi lomsebenzisi kunye nohlaziyo malunga nomyalelo wabo. Ingasetyenziselwa ukuphendula imibuzo yabo, imibuzo kunye / okanye ezinye izicelo. Ukuba uMsebenzisi uthatha isigqibo sokungena kuluhlu lwethu lokuposa, baya kufumana ii-imeyile ezinokubandakanya iindaba zenkampani, uhlaziyo, imveliso ehambelana nayo okanye ulwazi lwenkonzo, njlnjl. bhala imiyalelo emazantsi e-imeyile nganye.
Njani ukukhusela iinkcukacha zakho
Thina masithathe yokuqokelelwa kwedatha, ukugcinwa kunye nokulungiswa kunye namanyathelo okhuselo ukuzikhusela abangenamvume yakungena, ukutshintshwa, ukuxela okanye ukutshatyalaliswa inkcazelo yobuqu, lomsebenzisi, iphaswedi, iinkcukacha zakho intengiselwano kunye nedata egcinwe Site wethu.
Utshintshiselwano lwedatha eyimfihlo kunye neyabucala phakathi kweSayithi kunye nabasebenzisi bayo kwenzeka kwisiteshi sonxibelelwano olukhuselekileyo lwe-SSL kwaye lufihlwe kwaye lukhuselwe ngesiginesha yedijithali.
Ukwabelana ngeenkcukacha zakho
Asithengisi, asithengisi, okanye siqeshe Abasebenzisi ulwazi lokuzazisa kwabanye. Sinokwabelana ngolwazi olujolise kumanani abantu abangahambelani kulo naluphi na ulwazi oluchaziweyo malunga neendwendwe kunye nabasebenzisi kunye namaqabane ethu eshishini, abathengisi abathembekileyo kunye nabakhangisi ngeenjongo ezichazwe apha ngasentla.
Utshintsho kule nkqubo wabucala
I-YTpals inokubona kokuhlaziya umgaqo-nkqubo wabucala nangaliphi na ixesha. Xa sisenza njalo, siza kuhlaziya umhla ohlaziyiweyo emazantsi ephepha. Sikhuthaza abaSebenzisi ukuba bajonge eli phepha rhoqo ukuze bafumane naluphi na utshintsho ukuze bahlale benolwazi malunga nendlela esinceda ngayo ukukhusela ulwazi lomntu esiqokelelayo. Uyavuma kwaye uyavuma ukuba luxanduva lwakho ukuphonononga umgaqo-nkqubo wabucala amaxesha ngamaxesha kunye nokwazi ukulungiswa.
uvume ezi meko
Ngokusebenzisa le Site, nina bhekisani ukuyamkela kwakho le nkqubo. Ukuba awuvumi kulo mgaqo-nkqubo, nceda musa ukusebenzisa Site yethu. Ukuqhubeka usebenzisa le Site emva kokufakwa utshintsho kulo mgaqo kuya kuthathwa ukuyamkela kwakho ezo tshintsho.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nale nkqubo Privacy, izenzo kule sayithi, okanye izenzo zakho kule sayithi, nceda uqhagamshelane nathi ku-:
Olu xwebhu lagqityelwa ukuhlaziywa ngoJanuwari 22, 2019